ISITHOMBE: Ifoni entsha yakwaNokia ayisayingeni ayama-Selfie, isidlise ngama-Bothie | News24
ISITHOMBE: Ifoni entsha yakwaNokia ayisayingeni ayama-Selfie, isidlise ngama-Bothie
London – Inkampani yaseFinland, iHMD Global Oy, yethule i-smartphone entsha yakwaNokia emzamweni wayo wokuqala wokuzama ukuwina amakhasimende aSamsung no-Apple.
INokia 8 izoqala ukutholakaka ngoSepthemba kanti izoqala ukudayisa emazweni ahlukene ngemali engu-€599, u-HMD usho kanjalo ngoLwesithathu.
Le nkampani, eyaqala ukusebenza ngonyaka ka-2016, neyathola imvume ekhethekile yokwakha amafoni akwaNokia, okwamanje ibilokhu igxile ekubuyiseni uNokia ngama-smartphones angambi eqolo kanye nokubuyisa ifoni yodumo esiyenziwe kabusha, iNokia 3310, eyaqala ukudayisa ngeminyaka yama-2000.
OyiChief Product Officer yeHMD, uJuho Sarvikas, uthi manje “sekuyisikhathi esihle” sokukwethula lolu hlobo lwefoni aluchaze njengolusezingeni eliphezulu kakhulu futhi olubaluleke kakhulu kwakhiqizwa yile nkampani.
OLUNYE UDABA:ISITHOMBE: Ingase yakhiwe nge-glass, ishajwe ingaxhunyiwe, i-iPhone elandelayo
Le foni izoshaya ngobuchwepheshe obaziwa nge-“dual-sight” obesebenza uma ushutha izithombe noma uqopha ama-video, nalapho ikwazi ukuthi iveze izithombe ezishuthwa ngekhamera engaphambili kanye nengemuva ngesikhathi esisodwa ngokuthi kuhlukaniswe phakathi i-screen. I-HMD ichaza lobu buchwepheshe njengobushutha izithombe ze-‘Bothie’, hhayi i-‘Selfie’.
Ukwethulwa kwale foni kuza njengoba u-Apple ezilungiselela ukwethula i-iPhone etsha kanti no-Samsung ukhipha iGalaxy Note 8. Kodwa-ke uSarvikas uthi ngokukhipha le foni abanandaba kangakho nezinkampani abazoncintisana nazo, kodwa banendaba kakhulu nokwakhela amakhasimende.
UNokia Oyj, wadayisela uMicrosoft leli bhizinisi lokwakha amafoni ngonyaka ka-2014. Ngo-2016 uMicrosoft wabe usulidayisela uHMD and FIH Mobile, nokungenye yezinkampani engaphansi kwenkampani eyakha amafoni eKapa.
Zibonele isithombe sale foni entsha yakwaNokia ngezansi: